Men – စာမကျြနှာ 100 – Healthy Life Journal
စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲ မျောနေတဲ့သူ . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရှေးရှေးတုန်းကအလွန်ပျင်းရိပြီး အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ကိုပေါဆိုတဲ့ လူတစ်ဦးရှိသတဲ့ . . ။ သူကအလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစားမလုပ်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့တစ်နေ့ကျရင် ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်လာရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကိုသာ မက်နေလေ့ရှိတယ်။ အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့ကိုပေါဟာ သူတစ်ပါးစွန့်ကြဲပေးကမ်းလာအောင် တောင်းရမ်းပြီးအစာစားရတော့တယ်။ တစ်နေ့မနက်ခင်းမှာ ကိုပေါတစ်ယောက်တောင်းရမ်းရင်း...
ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီး။ မေး. ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့အကြောင်းကို သိပါရစေဆရာမ။ ဖြေ. ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်က ဓာတုပစ္စည်းတွေကို သာမန်ထက်ပိုပြင်းထန်စွာ တုန့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ သန့်စင်ပစ္စည်း၊ ဆံပင်ဆိုးဆေး၊ နေ့စဉ်သုံးနေရတဲ့ လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေက ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမွှေးနံ့ပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ဆပ်ပြာ၊ ရေမွှေး၊ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး၊...
မိုးနတ်မင်းကြီးကို ကြောက်တယ် . . .(၂)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဘယ်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်သလဲ . . . ဆိုးရွားတဲ့ ဆူဒိုမိုးနတ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းဟာ ဆေးရုံတက်နေတဲ့ လူနာတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံတက် လူနာတွေထဲမှာ အထူးသဖြင့် ခုခံအားနည်းနေတဲ့သူတွေ၊ ဥပမာ ဆီးချိုရောဂါသည်တွေ၊ ကင်ဆာဆေးသွင်းရသူတွေ၊ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်...
မိမိရုံးခန်းအတွင်းမှာပင် ပြုလုပ်နိုင်မည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
ကိုထက် တစ်နေကုန်ထိုင်နေရတဲ့ သူတွေအတွက် ရုံးခန်းထဲမှာပဲ လေ့ကျင့်နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားများအတွက် လေ့ကျင့်ခန်း လိုအပ်တာကတော့ ခြေထောက်ခိုင်တဲ့ စားပွဲတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး လက်တွေကိုစားပွဲပေါ်တင်ထားပါ။ အဲဒီနောက် လက်မောင်းနဲ့ ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကို အားပြုပြီး ခြေထောက်ကို ကြမ်းပြင်နဲ့ကွာသွားတဲ့အထိ...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး မေး . ဘာကြောင့်သွားကျဲရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ . ဒီအတိုင်းပုံမှန်ဆိုရင် သွားတွေကပုလဲလုံးလေးတွေ စီထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ လူတိုင်းကလည်း အဲဒီလိုသွားလေးတွေစီပြီး ညီနေတာကိုတပ်မက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ မေးရိုးကကြီးတယ်၊ ပေါက်လာတဲ့သွားက သေးတယ်ဆိုရင် မေးရိုးနဲ့သွားအချိုးအစားမညီတဲ့အခါမှာ သွားလေးတွေသေးနေတဲ့အတွက်...
သင်ကြိုက်သော သီချင်းအမျိုးအစားက သင့်အကြောင်း ပြောပြနေပါတယ်
ကိုထက် သင်နားထောင်နေတဲ့ သီချင်းတွေက သင့်အတွက် နားထောင်လို့ကောင်းနေရုံသာမကပဲ သင်ရဲ့အတွင်းစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပါ ဆက်နွယ်နေတတ်တဲ့အတွက် ပြင်သစ်လေ့လာသူတွေက “တေးဂီတဆိုတာ သံစဉ်များဖြင့် တွေးတောခြင်းအနုပညာ”လို့တောင် တင်စားခေါ်ဆိုထားကြပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားပေါ်မူတည်ပြီး သူတိုရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းအမျိုးအစားတွေကလည်း ကွာခြားနေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဘယ်သီချင်းအမျိုးအစားတွေကို ကြိုက်တဲ့သူတွေက ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်ဆိုတာကို ပထမဆုံးစစ်တမ်းကောက်လေ့လာပြီး...
ပဲနို့ဘူးကို ဖွင့်ပြီး ချက်ချင်းသောက်လျှင် အကောင်းဆုံး
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပဲနို့ဘူးကို ဖွင့်ပြီး ချက်ချင်းသောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်က Healthy Life ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ပဲနို့က အချဉ်ပေါက်လွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပဲနို့ကို အခုဖွင့်ပြီး...
အောင်မြင်ဖို့အတွက် မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ပေးသော အကြံဥာဏ်အချို့
၊ ကိုမိုး ၊ ကောလိပ်က ထွက်ပြီး အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို ဖန်တီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ရဲ့အကြောင်းကို လူတိုင်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ သူ့အသက်က အခုဆို ၃၁ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့...
ကျွန်မ သေတော့မှာလား . . .
ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် (ဆေးရုံအုပ်ကြီး-ငြိမ်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မနီမိုး အခုတလော သွားကိုက်နေပါတယ်။ သွားကိုက်ပေမယ့် မနီမိုး ကျိတ်ခံစားရနေရတယ်။ သွားကိုက်တဲ့ ဝေဒနာကြောင့် ဘာကိုမှလည်း မစားနိုင်၊ မသောက်နိုင် . . တစ်ချိန်လုံး ပါးတစ်ခြမ်းကိုဖိပြီး နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကို အပြင်းအထန်...
မျက်စိကိုက်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှာ . . .
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မေး. မျက်စိကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ. မျက်စိကိုက်တာက အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ ဆရာတို့ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်တွေ နေ့တိုင်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိကိုက်တာက တကယ်ရောဂါမရှိဘဲ ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဒဏ် (Strain)...